Wasiir Maxamed Kaahin Oo Dugsanaya Wax Ka Xun Wixii Uu Ku Eedayn Jiray Xukuumaddii Madaxweyne Riyaale – somalilandtoday.com
Wasiir Maxamed Kaahin Oo Dugsanaya Wax Ka Xun Wixii Uu Ku Eedayn Jiray Xukuumaddii Madaxweyne Riyaale
Wasiirka Wasaaradda arrimaha guddaha Somaliland ahna Guddoomiye ku-xigeenka Xisbiga KULMIYE Maxamed Kaahin Axmed ayaa u muuqda inuu dugsanayo wax ka xun wixii uu shallay ku eedayn jiray Xukuumadda Madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin.
Wasiir Maxamed Kaahin oo si weyn u mucaaradi jiray Madaxweyne Daahir Riyaale ayaa marar baddan ku eedayn jiray in aanay sharciga iyo dastuurka ku dhaqmin,isla markaana wuxuu ugu baaqi jiray inay sharruucda dalka ku dhaqmaan”Waxa qudha ee Qaranka loo hawlgalaa ha noqoto in sharcigiisa la illaaliyo oo waliba ay illaaliyaan cidda sharciga maanta kursiga ku fadhida ,dastuurka iyo shuruucda ka fasirantay ha la illaaliyo.”ayuu yidhi Maxamed Kaahin wakhtigaa.
Dhanka kalene Maxamed Kaahin ayaa inta baddan ka caban jiray War-baahinta Qaranku in ay caydo madax-da Xisbiyadda UCID iyo KULMIYE,waxaanu ku baaqi jiray in arrintaas la joojiyo”War-baahinta Qaranka ha laga daayo gacan maroojinta,waar tan anniga la igu caayayaa guul keeni mayso ee axsaabta lagu caayayo.”ayuu yidhi Maxamed Kaahi.
Geesta kalene arrimahan uu shalay Maxamed Kaahin ku eedayn jiray Xukuumaddii Madaxwweyne Riyaale,waxa baro dheeraysay oo ka baddisay Xukuumadda uu hadda kamid yahay ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Biixi,taas oo ficiladaas iyo qaar ka darran-ba ku kacday,isla markaana loogu baaqo in ay ku soo noqoto sharciga dalka iyo dastuurka.
War-baahinta Qaranka ayaa si joogta ah mar walba hadda u weerarta Madax-da Xisbiyadda UCID iyo WADDANI,taas oo ay cabasho ka muujiyeen masuuliyiinta Xisbiyadda Mucaaradku,haseyeeshee aan dheg-jalaq loo siin,waxaanay u muuqdaan qaar ka sii darray,iyadoo ay Bulshada reer Somaliland arrintan si weyn uga biyo diideen,isla markaana ay baraha bulshada ku dhalliileen Tv-ga Qaranka iyo war-baahinta kale ee Dawladda.
Si kastaba ha-ahaatee Wasiir Maxamed Kaahin Axmed ayaa u muuqda inuu yahay nin dugsanaya wax ka xun wixii uu shallay ku eedayn jiray Madaxweyne Riyaale iyo Xukuumaddiisa,